မတူညီတဲ့ရာသီကာလအတွင်းအချိန်ဇုန် | နာရီအားဖြင့်ထရေးဒင်း - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
အချိန်ဇုန်သင်ကသင့်အတွက်အဆင်ပြေအခါတိုင်း binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ သငျသညျရက်အပေါ်ဒါပေမယ့်လည်းတနင်္ဂနွေမသာရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
အာရှ session တစ်ခု
သည် "ထူးအိမ်သင်" စျေးကွက်၏အင်္ဂါရပ်များ
ယင်းအပေါ်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်။ တနင်္လာနေ့တွင်မော်စကိုအချိန်အားဖြင့်ညသန်းခေါင်ယံမှာအသစ်တခုကုန်သွယ်နေ့ကဆစ်ဒနီနဲ့ Wellington ကဲ့သို့သောကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာကစတင်ခဲ့သည်။ ဒေသခံငွေကြေးဖလှယ်မှုကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစတင်စျေးကွက် "စတင်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်တွင်, သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ် platform ပေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
ဤသည်ကုန်သွယ် session တစ်ခုပစိဖိတ်ဟုခေါ်သည်။ နယူးဇီလန်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးသတင်းနယူးဇီလန်ဒေါ်လာ (NZD) နဲ့ငွေကြေးအားလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်ဖြစ်သောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 00 မှာ: 30 ယူအက်စ်အေအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပေါ်လာနိုင်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အတူငွေကြေးအားလုံးအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။
ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးရုံကိုအခြားကဲ့သို့ကိုးနာရီကြာရှည်ခံသည်။ ဒါဟာချိန်းန်ထမ်းများအတွက်စံအလုပ်လုပ်တစ်ရက်ပါပဲ။ သို့သျောလညျးသငျသညျနံနကျ3နာရီလောက်မှာရှေ့၌သင်တို့ဇယားအပေါ်အများကြီးလှုပ်ရှားမှုမမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကုန်သည်အများစုနေဆဲအိပ်ပျော်ကြောင့်ဒါဟာပါပဲ။
အာရှ session ကိုစတင်သောအခါ, ယန်း (JPY) နှင့်သြစတြေးလျဒေါ်လာ (AUD) နဲ့ငွေကြေးအားလုံးတက်ကြွစွာဖြစ်လာသည်။
အကြောင်းကို2at: ဂျပန်ပေါ်မော်စကိုအချိန်အားဖြင့် 50 ဒေတာအလွန် pair တစုံ USDJPY နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည်သောပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်ယင်း၏ငွေကြေးအလွန်အကျွံသို့မဟုတ်လွန်းအနည်းငယ်သာကုန်ကျပါဘူးသေချာစေသည်။ ထိုကြောင့်ဘဏ်စျေးကွက်သို့ငွေကြေးအပိုဆောင်း volumes ကိုလောင်းအားဖြင့်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဒါဟာရုတ်တရက်ဖြစ်ပျက်များနှင့်စီစဉ်ထားမရနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါသငျသညျထကျသို့မဟုတ်ဆင်းဖြစ်စေစျေးနှုန်းပြောင်းရွှေ့ရသည်ဖြစ်သောဇယားအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသောဒေါင်လိုက်လိုင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အာရှ session ရဲ့ဒီအချိန်အတော်လေးတည်ငြိမ်အေးဆေးစဉ်းစားသည်နှင့်ဥရောပနိုးထရန်အဘို့အစျေးကွက်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
9 at: 00 မော်စကိုအချိန်အားဖြင့်, Frankfurt, ဇူးရစ်, ပဲရစ်, လန်ဒန်ဂိမ်းရိုက်ထည့်ပါ။ လူကြိုက်များဖလှယ်မှု, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေနှင့်အကြီးဆုံးဘဏ်တွေကအဓိကလှုပ်ရှားမှုထဲမှာရရှိလာတဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်စတင်ဖို့။ 10 at: မော်စကိုက 00, လန်ဒန်အဖွဲ့အစည်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဗြိတိန်, ဂျာမနီနှင့်ယူရိုဇုန်အပေါ်သတင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ဤအချိန်တွင်ဗြိတိန်ပေါင် (ပေါင်), ဆွစ်ဖရန့် (CHF) နှင့်ယူရို (EUR) အကြီးဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုခံစားရသည်။
ဒါ့အပြင် 10 မှာ: 00 မော်စကိုစတော့အိတ်ချိန်းသည်ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံဖို့ရူဘယ်ကိုဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်။ 18 သည်အထိ: မော်စကိုက 00 USDRUB နှင့် EURRUB ကုန်သွယ်မှုဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
14 at: 00 စတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှုတစ်နေ့လယ်စာစားရှိသည်, နှင့်ဇယားပေါ်တွင်အတက်အကျနည်းနည်းသာယာတဲ့ဖြစ်လာသည်။
15 ကနေစတင်: မော်စကိုက 00, စျေးကွက်ဖွင့်ဖို့အမေရိကန် session များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ ဤအချိန်တွင်အမေရိကန်အပေါ်ပထမဦးဆုံး data တွေကိုဒေါ်လာစျေးနှင့်အတူငွေကြေးအားလုံးပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်သည့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ OLYMPTRADE က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များကိုလိုက်နာဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပေးသည်။ အဲဒီမှာသင်တစ်ဦးအခမဲ့စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်ဒါပေမယ့်လည်းနီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်ရပါမည်အရာအထင်ရှားဆုံးသတင်းများ, တစ်ဦးကိုအပတ်စဉ်ရွေးချယ်ရေးမသာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
16 at: ဥရောပဖလှယ်မှု 00 သည်အထိဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းမော်စကိုက 18 နယူးယောက်၏စတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှုနှင့်ချီကာဂိုကိုတရားဝင်, အလုပ်လုပ်ဖို့စတင်: 00, တက်ဆင်းမိမိတို့၏အမျိုးသားရေးငွေကြေးတွန်းအားပေး။ ဤအချိန်တွင်အဆိုပါ EURUSD pair တစုံဖြစ်ကောင်း binary options များအပေါ်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တက်ကြွသောဝင်ငွေအဘို့အခြားသူတွေထက် သာ. ကောင်း၏။
16 at: မော်စကိုက 30, ယူအက်စ်အေပေါ်တွင်အရေးကြီးသောသတင်းအလွယ်တကူဇယားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ထို့နောက် 18 ကနေစတင်: မော်စကိုအချိန်အားဖြင့် 00, သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပေါ်အရေးကြီးသောဒေတာတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အတူအားလုံးကိုရွှေကိုထိခိုက်ဒါဝင်လာသောသတင်းကိုလျစ်လျူရှုမရသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမေရိကားအပေါ်အပြုသဘောဒေတာတတန်းအတွက်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့အဆင်းမှကိုရွှေပေါ်စျေးနှုန်းအတင်းနိုင်ပါတယ်။
သန်းခေါင်အသုံးပြုပုံစျေးကွက်အပေါ်မုန်တိုင်းပြေသည်။ နှင့်ပစိဖိတ် session ရဲ့အသစ်တခုနေ့ကစတင်ခဲ့သည်။
ကြောင်းဖွင့်လှစ်မှတ်ချက်နှင့်အစည်းအဝေးများနာရီပိတ်ပြီးယခုပင်ဖြစ်၏ဘယျအခြိနျပေါ် မူတည်. ကွဲပြားစေခြင်းငှါ - အချိန်သည်ဆောင်းကာလသို့မဟုတ်နွေရာသီ။ ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည့်အရေးကြီးသောချွေသတင်း၏အချိန်ကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်နွေရာသီအတွက်အရာအားလုံးတစ်နာရီအားဖြင့်ပြန်ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ မော်စကိုအချိန်အားဖြင့် 16: 30, ဒါပေမယ့် 15 မှာ: ဥပမာ, နွေဦး၏အလယ်တွင်ထံမှ စတင်. , သင်အရေးကြီးသော 30 မှာအမေရိကားကိုမအပေါ်သတင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပစိဖိတ် session တစ်ခု: 00: 00 - 09: (ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနဲ့နွေရာသီအတွက်) 00
အာရှ session တစ်ခု: 03: 00 - 12: (ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနဲ့နွေရာသီအတွက်) 00
ဥရောပ session တစ်ခု: 09: 00 - 17: (ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌) 00, 08: 00 - 16: (နွေရာသီ) 00
အမေရိကန် session တစ်ခု: 16: 00 - 01: (ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌) 00, 15: 00 - 00: (နွေရာသီ) 00
ဒါ့အပြင်သင် "ထူးအိမ်သင်စျေးကွက်" ၏အယူအဆမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအနည်းငယ်ကုန်သွယ်အစည်းအဝေးများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားထပ်အချိန်ပါပဲ။ ကဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါသင်ကအရမ်းအားကောင်းတဲ့နှင့်လုံးဝခန့်မှန်းရခက်သောစျေးနှုန်းအတက်အကျတွေ့နိုင်ပါသည်။
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သအရင်ကဆိုရင်အောက်ပါအချိန်ကာလအတွင်း binary options များဝယ်ယူမှရှောင်ကြဉ်ကြောင်းအကြံပြု:
ဆောင်းတွင်းမှာ: 2: 45 - 3: 45; 8: 45 - 9: 15; 15: 45 - 16: 15
နွေရာသီမှာ: 2: 45 - 3: 45; 07: 45 - 8: 15; 14: 45 - 15: 15
ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ, ရန်ပုံငွေများနှင့်ဘဏ်များဟာသူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုတွက်ချက်ရန်စျေးကွက်မှမိမိတို့ရန်ပုံငွေထုတ်ယူသည့်အခါအလားတူလျင်မြန်သောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေ, ဒီဇင်ဘာလ၏နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွက်ကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီနောကျတစျခုသဖြင့်တဦးတည်း, ထိုဖလှယ်မှုကသူတို့ရဲ့ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များအတွက်စွန့်ခွာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ငွေကြေးအားလုံးအတှကျလှုပ်ရှားမှုကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
Tags: အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု Affiliate Program ကို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင်းဆုံးညွှန်ပြချက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင်းဆုံးအနိုင်ရနည်းဗျူဟာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအရစ်ကျ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသိုက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုကျွမ်းကျင်သူများက, အိုလံပစ်ကုန်သွယ် Forex app ကို, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကုန်သွယ်ရေးအိုလံပစ်, ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ login, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ